Iintlanganiso ze-SKÅL ziBukhoma kuBuntu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Iintlanganiso ze-SKÅL ziBukhoma kuBuntu
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Kuhambo lwam lokuya eKrabi nasePhuket, ndaba nethamsanqa lokuzimasa SKÅL iintlanganiso kwezi dolophu zombini. NjengoMongameli I-SKÅL Bangkok lihlala lilithuba elihle lokundwendwela iiklabhu zoodadewethu eThailand.
Ehlabathini lonke sineeklabhu ezingama-345 kumazwe ayi-104. I-SKÅL imelwe ekuhlaleni, kuzwelonke, nakwingingqi, kwaye ndizukile ukunxiba iminqwazi emi-3 kwiLizwe le-SKÅL ukuba yi-VP kuzo zombini i-SKÅL Thailand kunye ne-SKÅL Asia.
I-SKÅL yamazwe ngamazwe eKrabi
Intlanganiso yaseKrabi ibibanjwe ngoJulayi 29, 2020, eAnana Ecological Resort.
Ukugcwaliswa njengentlanganiso yesidlo sangokuhlwa seKrabi “SOS” ngumnini weholide kunye neklabhu uMongameli uWolfgang Grimm ukhuphe umyalezo wakhe we-SOS (umoya wokwabelana) kwaye intlanganiso izakuxoxa ngendlela yokuba ngumqhubi okhutheleyo woluntu lwezokhenketho lwasekhaya kwaye kula maxesha angazange abonwe ngaphambili. neendlela ezahlukileyo zokwenza imisebenzi kunye noluntu lwethu luzinze ngakumbi kwilizwe le-COVID-19.
Isithethi seendwendwe yayinguKevin Rautenbach Snr VP SKÅL Thailand owazisa iKrabi Destination Domain ukukhuthaza eyona hotele yaziwa kakuhle yikhabhoni kunye neemveliso zokhenketho lwendawo ekuyiwa kuyo. Indawo yokuhambisa kunye nokubhukisha iya kubonelelwa yiTraveliko OTA simahla. Intlawulo yexesha elinye kwiwebhusayithi entsha kunye nenkonzo yenziwa ngexesha lentlanganiso. Lonke ugcino lomphathi wesitishi kule webhusayithi lusimahla. Kwintlanganiso u-Kevin uphinde waxoxa ngeeprojekthi ze-CSR ezikhusela indalo kunye nokusombulula indlala e-Krabi, kunye nemibono ye-carbon offset efana nokwenza ukukhanya okutyayo kwe-hydroponic landscapes kwiiphahla ezithe tyaba kunye / okanye ukuthatha inxaxheba ekukhuliseni / ekukhuseleni imithi, imihlume kunye nengca yolwandle ngokubambisana nemibutho ye-offset .
UAnana wayengavulekanga ngokupheleleyo ngomhla wentlanganiso nangona kunjalo uWolfgang waziva kubalulekile ukuba sidibane ubuso ngobuso ukuqaphela izibonelelo zentsebenziswano. Indawo yokuphumla ivulekele iindwendwe kwiintsuku ezimbalwa kamva kwaye ngoku iyasebenza emva kokutshixwa.
Umnyhadala wawusimahla ngaphandle kwesidlo esinikezelwa ngamaziko amathathu eKrabi; Indawo yokuhlala iAnana Ecological, i-Umberto's Cuisine yaseTaliyane kunye neKhitshi ekhethekileyo eKhooper.
Ngabantu abayi-30 yayikukuvuyela okukhulu kule dolophu incinci yeholide! Sibe nencoko yendlela yokunxibelelana e-2 ekhokelwa nguMongameli uWolfgang emva kwesidlo sangoku malunga noko uKrabi Skalleagues angathanda ukukubona kusenzeka phambili kwaye banike isiqinisekiso esihle kwiiklabhu ziceba ukwenza iKrabi indawo ye-1 yezokhenketho eThailand emva kwe-VP Umboniso kaKevin Rautenbach obalaseleyo kwintengiso yokuFikela.
Amabini eSkalleagues ngokuhlwa anikele ngaphezulu kwe-2 rai (3200 sqm) yophahla olucaba kunye nendawo yomhlaba yokusetyenziswa kwe-SKÅL Krabi kwiiprojekthi ezinobungane. Ukuze ukwazi ukuguqula indawo engasetyenziswanga ibe ziindawo zeeprojekthi zoluntu ezinokuphinda zisetyenziswe ezinje ngezolimo kubandakanya nokuma komhlaba okudliwayo.
Umongameli uWolfgang uphawule wathi: “Obu bubusuku obumnandi. Esi sisiphumo esihle. Sisungule umbono wokuba sivavanye ulimo olunxulumene noKhenketho kuPhahla lwedolophu yaseKrabi kwaye umhlaba waseKlong Muang ubonelelwe simahla.
“Kuyamangalisa! Amalungu amabini akhawuleze anikela ngezakhiwo zawo ukuze aqalise le projekthi ibalulekileyo. ”
I-SKÅL yamanye amazwe iPhuket
Indawo ibiyindawo entle ye-InterContinental Phuket Resort ye-SKÅL Phuket's AGM ngo-Agasti 6, 2020, iiyure ezili-1545 kunye neeyure ezili-1800 kwisidlo sangokuhlwa.
Yakuba idlulile kwi-25% ikhoram yamalungu, i-SKÅL Phuket AGM ivulwe noMongameli obambeleyo uRobert De Graaf ngokwamkela kwakhe bonke entlanganisweni kuquka nelungu elisekwe uMethee Tanmanatragul kunye noMongameli wase-Skalleague u-AJ Wood ovela eBangkok.
Uxolo belufunyenwe luvela kuMongameli weSKÅL wamazwe aphesheya waseThailand uWolfgang Grimm.
Kwintetho yakhe yokuvula uRobert wakhankanya umbulelo wakhe okhethekileyo kuMongameli odlulileyo uRichard Valentine ophilileyo.
Ngenxa yokurhoxiswa kweNkomfa ye-Asia ye-SKÅL eyayicwangciselwe uJuni kulo nyaka, ukuba kunye neziqithi ezininzi zeshishini lokhenketho zaye zayeka emva kwesibetho se-COVID-19.
URobert uye wabulela iPhuket Exco ngomsebenzi wabo oqhubekekayo kunyaka wesiphithiphithi kukhenketho kwihlabathi liphela.
Iingxelo zaziswa ngamalungu ekomiti alandelwa kunyulo lwebhodi yamagosa entsha ye-2020-22:
UMongameli-uRobert de Graaff
VP -Krit Srabua
Unondyebo -Kevin Rautenbach
USkål oselula-uBen Tabateau
Ukuthengisa - uFred R. Muenger
Ukuphuma kakuhle emva komnatha waselunxwemeni weNdawo ekuchithelwa kuyo iiholide kwi-cocktail yenyanga yokunxibelelana ne-40-50 pax ababekho yayine-buzz yokwenyani.
I-SKÅL yamanye amazwe iBangkok
Iqela lase Bangkok liza kuba nentlanganiso yalo elandelayo (isidlo sangokuhlwa) ngoLwesibini, nge-11 Agasti 2020, kwiiyure ze-1730 kwihotele iRiva Surya.